5 Best Places hihinana Ice Cream In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Places hihinana Ice Cream In Eoropa
(Last Nohavaozina: 19/03/2021)
Ireo izay tsara vintana ho ampy mba hitsidika Eoropa mahalala ny fientanentanana sy ny heviny ny traikefa nahafinaritra fa manome. Traveling any Eoropa Mety hanatsara ny fiainanao amin'ny fomba maro. avy amin'ny fiteny, mahafinaritra zava, sy ny tantara ny mahafinaritra sakafo fa tsy afaka miverina an-trano mahita. Ireo izay manana mamy manokana nify solon'ny gilasy dia afaka mahatsapa zavatra mahagaga. Various gilasy parlors manerana an'i Eoropa hanatitra Miroborobo ny mahafinaritra tsirony. Sady koa anie, gilasy no fomba tonga lafatra mba hipetraka indray ao amin'ny alokaloka, ary miala sasatra rehefa avy lava andro trandrahana tanàna. Raha toa ianao ka mandeha amin'ny alalan'ny Eoropa ary ny gilasy tia, efa naka ny traikefa midadasika amin'ny nandeha alalan'ny Eoropa sy atambatra ny lisitry ho anao. Ary noho izany, eto ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra hihinana gilasy any Eoropa.
Aiza hihinana Ice Cream In Italia?
Italia no nalaza noho ny fitiavana ny fiainana sy ny sakafo matsiro. Ny gilasy toa hanambatra ny roa. Maro gilasy tia manaiky fa tsy mbola nitoetra mandra-nanandrana ny scoop ny tena Italiana gelato. Ny manan-karena sy ny tsirony mihasimba no tondro mazava fa ny gilasy no natao amin'ny olona izay liana momba ny asa tanana. Izany no tsara vintana raha toa ianao ka ampy ho avy manerana tsara toerana gilasy.
toy ny ronono
Roma no an-trano ny iray amin'ireo tsara indrindra parlors gilasy any Eoropa, toy ny ronono. Ny tanàna feno gilasy tia. Sehatra tsara tarehy ny olona mankafy gelato no mampiavaka. Na izany aza, ao an-tanàna amin'ny toeram-pivarotana maro gelato, iray miavaka amin'ny maha- miafina vatosoa fa ny mpankafy gelato dia mila mitsidika. Maro be mpizaha tany sy ny mponina mirohotra ho avy Il latte. Inona no hahatonga ny gilasy no tsy manam-paharoa no afaka manontany? Voalohany, maro ny olona tia ny manan-karena sy matsiro tsirony dia manatitra. Manangona ny gelato isan'andro sy hampiasa ny fangaro voajanahary. Ny ranomandry menaka dia manan-karena sy ny creamy, tahaka ny anaran-kevitra. Raha toa ianao ka manontany tena hoe inona Avia Il latte dia midika hoe, Ho faly ianareo hahafantatra izany adika hoe “toy ny ronono”. Na ny olona mankahala ronono aza dia afaka mankafy ny tsirony tsy misy ronono. Ny tsiro dia Mahavariana. Faharoa, ny olona mankafy ny rivotra iainana ny toeram-pivarotana. Izany incorporates ny fototra sy mihevitra Roma.
Aiza hihinana Ice Cream In Alemaina?
Ny gilasy mahafinaritra dia tsy zavatra ampifandraisin'ny maro amin'i Alemana. Na izany aza, Ballabeni Gilasy eto hanova izany sy ny tsy mampino Mandavaka. Ity aisy gilasy miavaka amin'ny gilasy ity dia any Munich no misy azy. Amin'ny efi-trano dia an'i Giorgio Ballabeni, ny grandmaster ao amin'ny kanto ny fanaovana gilasy. Nanomboka tamin'ny gilasy ho toy ny fialam-boly fotsiny, ary ny rehetra dia feno fisaorana Munich ho azy. Maro ny mpizaha tany sy ny mponina tia ny fivarotana, nandao izany mampino famerenana. Rehefa hizahanao toetra ny gilasy, Tsy sarotra ny mahita ny antony. Efa honed ny asa tanana ho lavorary, ary dia iray amin'ireo tsara indrindra eo amin'ny saha. Ny fitiavany dia tonga amin'ny alalan'ny isaky ny scoop. Ny tombony fanampiny dia fa manana ny gilasy kamiao ary mety cater amin'ny antoko tsy miankina!
Aiza hihinana Ice Cream tany Hongria?
Tokony hahita ny tenanao ve ianao tao an-drenivohitra ny Hongria, ho azo antoka mba hitsidika Gelarto Rosa. Zavatra tsy mahagaga fivarotana gilasy any amin'ny am-Budapest. Izy ireo momba ny fomba amam-panao rehetra, firaisana ara-nofo, olon-tiany, sy ny fitiavany, izay hita ao amin'ny asany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, izy ireo tena manam-pahaizana any an-tsaha. Raha ny ny gilasy, ianao dia ho faly nandre fa mampiasa afa-tsy ny tsara indrindra organika fangaro. Lehibe rehetra gilasy tsena fialana solon gilasy. Na izany aza, Inona no mahatonga Gelarto Rosa tsy manam-paharoa ny mpanao asa tanana dia fomba mamolavola ny gilasy any amin'ny raozy. Raha toa ianareo efa sendra Szent István Square nandritra ny andro mafana, ho azonao antoka fa hahita olona marobe miaraka amina gilasy miendrika raozy mandehandeha.
Ny trano gilasy tsy maintsy tsidihina manaraka dia avy any Zurich. ny dia gilasy efi-trano izay nahazo ny aingam-panahy avy any Arzantina. Ny mpanorina Rofe Bote nipetraka tao nandritra ny roa taona mahery ary nentiny teny an ny kolontsaina. Dia talanjona izy nahita ny Tsirom, mamelombelona, ary voajanahary gilasy. Niaiky volana izy, ka dia nitondra azy ho any Soisa. Amin'izao fotoana izao dia misy toeram-pivarotana roa any Zurich, ary hiandrandra ny Arzantina fakany. Ny mozika sy ny velona Latina mihevitra Azo antoka fa hampitraka ny fanahy kokoa rehefa hahazo ny sasany matsiro gilasy. Hasta dia tsara nafangaro Arzantina tsirony sy ny fahaizan'ny Soisa.
Ice Cream any Frantsa
Ny Frantsay dia malaza ho be dia be ny zavatra. Voalohany, misy ny fitiavan'izy ireo ny kanto, maritrano, sy ny filozofia, izay tsy azo lavina. Paris dia velona fanekena izany. Faharoa, fantatra tsara izy ireo noho ny mahandro sakafo mahagaga. Anarana iombonana amin'ny lakozia no any amin'ny laharana be indrindra eto amin'izao tontolo izao, ary afaka mahazo antoka fa ny fitsipi-pifehezana ao an-dakozia dia mampiseho ao amin'ny efitra. Noho io fitiavana sakafo, Tsy mahagaga izany fa manana ny tsara indrindra ny sasany amin'ireo menaka ranomandry any Eoropa.
Ny iray amin'ireo malaza indrindra fanahy dia Berthillon. Izany no iray amin'ireo malaza indrindra any Paris parlors sy noho ny antony tsara. Ary novohana tao an-60, ary efa nanompo matsiro gilasy hatramin'ny. Ianao fahafahana hisafidy ny iray amin'ireo matsiro tsirony, ary afaka mihitsy aza afangaro sy mifanaraka tsirony mba hahita ny tsara ho anao ny tsikombakomba.
Na aiza na aiza no misafidy ny handeha, ianao hanana antoka fa tsara scoop ny gilasy. Tsarovy fotsiny ny mipetraka indray ary mankafy ny toerana manodidina ary ny fanandramana rehefa manao izany. Raiso rehetra sy hankafizana ny mahavariana tsirony ny gilasy amin 'izao toerana isan-karazany.
Vonona hiaina ny tiany sy ny tsirony izay tsy maintsy atolotra Eoropa? Boky Ny Fiaran-Dalamby Tapakila ankehitriny. Aorian'izay, azonao atao ny mahatsapa ny tontolo mahafinaritra ny gilasy ao Eoropa.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best Places hihinana Ice Cream In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-eat-ice-cream-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / de ho / tr na / fiteny azy sy ny maro hafa.
#mampangatsiaka #gilasy #traveleurope eurotrip Tendan-kanina
Torohevitra Eco Travel, Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel China, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
7 Toerana itiavana an'izao tontolo izao